Rahoviana sy ny fomba fampiasana ny fanafody Primperan | Tontolo alika
Rahoviana no hampiasa Primperan
El Primperan dia fanafody voatondro rehefa hiseho ny olana amin'ny tsinay. Zava-mahadomelina mety amin'ny ankizy sy ny olon-dehibe izy io, ary ho an'ny alika ihany koa, satria maro ny mpitsabo biby no manoro izany.
Na dia marina aza fa ny alika matetika dia samy manana ny fanafodiny, misy kosa ny an'ny olona izay azo ampiasaina amin'ny fomba mitovy amin'ny alika, eo ambanin'ny famandrihan'ny vet ary ny fanajana ny fatra, izay mety miovaova. Ity fanafody ity dia malaza amin'ny fanampiana ny vavony hamerina ny tenany rehefa misy ny olana.
1 Inona no atao hoe Primperan
2 Alohan'ny hanomezana Primperan
3 Fa maninona no mandoa ilay alika?
4 Rahoviana no manahy
5 Ahoana ny fomba hitantanana Primperan
6 Fepetra hafa
7 Fihetseham-po mety hitranga amin'ny alikao amin'ny Primperan
8 Solon'ny Primperan
9 Inona no tsy tokony hatao amin'ny alikao rehefa mandoa izy
9.1 Omeo fanafody ianao nefa tsy mila hevitra
9.2 Andraso ny handalovany
9.3 Aza manome sakafo azy
Inona no atao hoe Primperan
Ny endrika mahazatra an'io fanafody io dia metoclopramide, ary voafaritra ho antiemetic. Midika izany fa ny zava-mahadomelina dia manakana ny hetsika mandoa sy maloiloy rehefa malahelo isika. Matetika izy io dia ampiasaina mba hisorohana ny fisaleboleboana amin'ny fitsaboana na hitsaboana ny maloiloy sy ny fandoa mety hitranga noho ny antony samihafa, manomboka amin'ny migraines ka hatramin'ny fanapoizinana. Ity zava-mahadomelina ity dia namboarina ho an'ny olombelona, ​​na dia maro aza ny mpitsabo biby dia manitatra ny fampiasana azy amin'ny alika satria tsy misy fiantraikany ratsy amin'izy ireo ary ny vokany dia mitovy amin'ny an'ny olona.
Alohan'ny hanomezana Primperan
Ny fanafody dia mety miteraka olana amin'ireo alika izay misy patolojia na olana, ka voalohany indrindra tsy tokony hitantana fanafody mihitsy isika raha tsy misy ny torolàlana sy ny fanaraha-mason'ny mpitsabo biby. Ity fanafody ity dia tsy amporisihina amin'ny ara-dalàna raha misy olana amin'ny allergy amin'ireo singa ao anatiny, raha misy ny olana amin'ny vavony toy ny perforations na mandeha ra, rehefa misy epilepsy na olana amin'ny voa na fo. Na ahoana na ahoana, ny veterinera dia tsy maintsy manao fanombanana ny toetry ny fahasalaman'ny alika amin'ny ankapobeny alohan'ny hitondrany ireo fanafody mba hahazoana antoka fa tsy miteraka olana mety hiharatsy izany.
Fa maninona no mandoa ilay alika?
Misy antony maro samihafa mahatonga ny alika afaka mandoa. Raha zavatra manokana io ary hitantsika fa tsy mandoa indray izy ary manohy mihinana ara-dalàna tsotra nisy zavatra nahatonga azy tsy nety. Tokony hahatsapa ny vavony ianao raha maharary. Fa amin'ny fotoana maro, ny fandoavana dia mifandraika amin'ny aretina izay manimba ny toe-javatra satria izy ireo dia avy amin'ny viriosy mahery vaika izay manimba ny ain'ny alika toy ny parvovirus na distemper. Amin'ireny tranga ireny dia tokony ho akaiky ny fitsidihana ny mpitsabo biby, satria ny Primperan dia hanampy azy ireo handoa kely fotsiny fa tsy hahasitrana ny alika.
Mety handoa koa ilay alika satria efa Olana amin'ny vavony, toy ny vavony na kibo marefo fotsiny. Amin'ireny tranga ireny dia ilaina ny mampifanaraka ny sakafon'ny alika sy ny fampiasana kalitao matanjaka, ny sasany amin'izy ireo dia namboarina ho an'ny alika mora tohina na ho an'ireo izay tsy mahazaka aretina.
Ny antony iray hafa mandoa dia mety katsentsitra anatiny. Ny alika dia tsy maintsy asiana embormorm ao anaty sy ivelany indraindray, ka izany dia tokony hotehirizina hatrany. Raha manana katsentsitra anatiny maro izy ireo dia hiteraka olana eo amin'ny tsinay sy ny vavony izay mety hiteraka fandoavana sy fivalanana.
La sakafo alika Mety hiteraka olana amin'ny vavony koa izany, indrindra raha manova azy tampoka isika. Ny alika dia nifanaraka tamin'ny fahazazany ka hatramin'ny karazan-tsakafo ary raha ovaintsika izany na tsy ampy dia mety tsy handefitra amin'ny sakafo sasany izy io ary hiafara, na dia amin'ireto tranga ireto dia misy ny fanitsiana ny sakafo dia hanana ny zava-drehetra isika voafehy.
Zavatra iray hafa mety hitranga raha hitantsika fa mandoa maharitra ny alika dia efa voapoizina izany. Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy mankany amin'ny mpitsabo biby foana isika hanome azy fanafody ary hiasa haingana, satria ny poizina sasany dia mety hanohintohina ny ain'ny alika. Ny Primperan dia hanampy anao ho sitrana rehefa notsaboina tamin'ny poizina ianao.
Rahoviana no manahy
Primperan dia ampiasaina raha ny alika dia mandoa sy mivalana be, izay le mety hiteraka tsy fahampian-drano. Raha alika kely na alika antitra io dia vao mainka mampatahotra ny toe-javatra, satria mora tohina kokoa izy ireo amin'ireo toe-javatra ireo. Na izany na tsy izany, rehefa mifandray amin'ny aretina lehibe kokoa ny olana dia tokony manatona dokotera ianao. Ary raha tsy fantatsika ny fomba hahafantarana ny antony mandoa, dia zava-dehibe ny fanaovana fizahana ara-pitsaboana hahitana ny antony, na noho ny fihinanana sakafo na virus.
Ahoana ny fomba hitantanana Primperan
Ny fanafody Primperan tokony hotanterahina arakaraka ny lanja ary miankina amin'ny filan'ny alika. Ilay mpitsabo biby no tokony hanome antsika torolàlana hitantanana azy fa tsy hihoatra ny fatra, satria tsy mitovy amin'ny alika kely sy ny alika olon-dehibe ary ny lanja ihany koa ny olana. Raha vantany vao manana ny torolàlana isika dia tsy maintsy manome ny syrup amin'ny endrika nanondroany antsika. Amin'ny tranga izay marary mafy ilay alika dia afaka manindrona ilay alika ny mpitsabo biby mba hahamora ny fitantanana sy ny fiatraikany haingana. Araho ny mpitsabo biby raha toa ka mihatsara amin'ny fitsaboana ilay alika.
Ny fiantohana ny fahasalaman'ny alikantsika no antony manosika lehibe indrindra hitantanana fitsaboana toy ny Primperan, izay mifantoka amin'ny olana tokana. matetika matetika ny zavatra mandoa no mahatonga ny fandoavana ary amin'ireny tranga ireny dia tokony ho ilay mpitsabo biby no manome fanafody hafa hamenoana ny an'ny Primperan.. Rehefa vavony ny olana dia misy fepetra hafa tokony hatao izay mitady hamerina ny fahasalaman'ny alika.
Ny iray amin'ireo zavatra tsy maintsy raisina dia tsy isalasalana fa ny sakafon'ny alika. Amin'ireny fotoana ireny rehefa marary izy dia azo antoka fa tsy hihinan-kanina firy, azonay omena anao ny tsiranoka izay misy sira mineraly hanampy anao hamerina hamerina amin'ny laoniny. Etsy ankilany, ny sakafo dia tsy maintsy manomboka mitandrina tsara, miaraka amin'ny sakafo toy ny vary masaka sy akoho masaka. Ity karazan-tsakafo ity dia hanampy anao hanatsara sy hahazo hery indray raha ny Primperan kosa dia hijanona tsy handoa intsony mba tsy hahavery ny otrikaina sy tsiranoka bebe kokoa ny alika. Ny andiana torolàlana dia izay hanampy ny alika hiverina tsikelikely. Farany, ny Primperan dia fanampiana izay tsy maintsy raisina amin'ity karazana tranga ity.
Fihetseham-po mety hitranga amin'ny alikao amin'ny Primperan
Fantaro fa, na tiana na tsia, fa ny, toy ny olombelona, ​​dia afaka mamaly amin'ny fomba tsara amin'ny fandraisana fanafody, na tsia. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mety ho hitanao fa manome anao olana izany ary ny fanafody dia ratsy kokoa noho ny aretina. Amin'ny tranga alika miaraka amin'ny ny Primperan, tena tsy fahita firy ny fanehoan-kevitra amin'ny biby rehefa mandray izany, saingy tsy azontsika atao ny tsy miraharaha izany.
Noho izany, eto izahay dia hilaza aminao hoe inona avy ireo mety hitranga. Raha mitranga izany, ny zavatra tsara indrindra dia ny fampiatoana ny fitsaboana ary mifampidinika amin'ny mpitsabo biby satria afaka manome safidy hafa ho an'ity karazana fanafody ity izy, na koa manolotra fitsaboana hafa tsy dia mahazatra.
Anisan'ireo fanehoan-kevitra ireo: tsy fitoviana amin'ny vatana, fihetsika tsy mandeha amin'ny laoniny, fangovitana, hodi-tory, fivalanana, tsy fijoroana, fitomboan'ny tosidra, tsy fitoniana, hasiaka sns.
Ireo toe-javatra rehetra ireo dia tokony hampandrenesina anao satria mety hanondro fa "tsy mahazaka" ireo singa rehetra ny biby fiompinao ary, noho izany, dia tsy mahazaka azy. Na izany aza, indraindray mety hisy vokany eo amin'ny lafiny hafa izany, rehefa miato ny fitsaboana, na voatazona amin'ny doka ambany kokoa, dia tsy miseho izy ireo. Raha ny tena izy, raha mijaly ny iray amin'ny alikao ny alikao dia handalo ao anatin'ny fotoana fohy (esorina ao anatin'ny 24 ora ny fanafody).
Tompona maro no tsy mankasitraka ny fanomezana ny alika fanafody, na manandrana manao azy io ho voajanahary araka izay azo atao. Raha ny tena izy, amin'ny tranga Primperan, dia misy fanafody an-trano izay mety hahomby (na mihoatra) noho ny fanafody ihany. Ny olana dia tsy dia fantatra loatra toa an'io izy ireo.
Ny iray amin'ireo fanafody voalohany ao an-trano dia ny fampidiran-dra. Tsy misy isalasalana fa rehefa mandoa alika dia mety noho ny tsy fahazoana aina ao amin'ny làlam-pandevonan-kanina, izay miteraka fandoavana. Noho izany, ny fampiasana anana izay manampy amin'ny fampitoniana ny rafi-pandevonan-kanina dia afaka mamaha ny olana amin'ny fandoavana ao amin'ilay biby. Amin'ity tranga ity dia afaka manatona mpitsabo raokandro ianao hanome anao fangaro ahitra ary manomana fampidirana. Tsy hisotro azy mafana ianao, nefa hangatsiaka satria hisotroanao toy ny rano. Mila miezaka mampisotro azy kely ianao, nefa tsy manery azy.
Safidy iray hafa, koa ara-pitsaboana, dia ny fampiasana karazana fanafody hafa hampitsaharana ny fandoavana. Primperan no be mpahalala, fa ny mpitsabo biby dia manana safidy hafa toa ny Metoclopramide, Cleboril, sns. Mazava ho azy, alohan'ny hampiasana ireo dia tsara ny manatona manam-pahaizana satria mety tsy izany no mety indrindra amin'ny alikanao noho ny fahasalamany, ny olana, sns.
Inona no tsy tokony hatao amin'ny alikao rehefa mandoa izy
Ny fahazoana marary alika dia tsy toe-javatra mahafinaritra ho an'ny olona. Raha ny marina dia afaka manahy be loatra ianao ary maniry ny hiverina amin'ny laoniny ny zava-drehetra. Ny olana dia izao, indraindray isika mirona hanao zavatra amin'ny fomba tsy marina. Noho izany, hiresaka izay rehetra tsy tokony hataonao ianao raha mandoa ny alikao.
Omeo fanafody ianao nefa tsy mila hevitra
Zava-dehibe ny hoe, izay karazana fanafody na fitsaboana rehetra dia mandalo manam-pahaizana aloha. Ny mpitsabo dia afaka mahafantatra raha izay tianao homena azy no tsara indrindra azony raisina, indraindray, azonao atao ny manome azy zavatra mety hampidi-doza ny fahasalamanyRehefa dinihina fa rehefa mandoa ianao dia mety ho malemy kokoa ary mety hiova ny hery fiarovanao, dia mampidi-doza ny fihetsika.
Na dia misy aza fitsaboana hafa, dia mety ho mahaliana ny manome ny fiavian'ilay mpitsabo biby satria fantany raha tsy mahomby amin'ny biby fiompinao ny sasany amin'ireo singa amin'ireto fanafody ireto.
Andraso ny handalovany
Eny ary tsia. Ny alika mandoa dia tsy famantarana fa misy zavatra matotra tsy mandeha. Mety noho ny sakafo nahatonga anao harary, nahatsapa ho tsy salama, na zavatra hafa arivo. Ny olana dia raha miseho imbetsaka ny mandoa, na raha "tsy ara-dalàna". Rehefa mitranga izany, tsy afaka miandry ianao na mieritreritra fa handray azy ny ampitso.
Amin'ny lafiny iray, ny zavatra tsara indrindra azonao atao dia ny miantso ny mpitsabo biby ary anontanio azy izany. Ny manam-pahaizana dia ho afaka hilaza aminao ny zavatra tokony hatao, na ny mandefa azy sarina mandoa, mankanesa any amin'ny consultation na manara-maso fotsiny ny toe-pahasalamany raha miharatsy izany.
Aza manome sakafo azy
Matetika io. Rehefa mandoa alika dia heverina fa tsy tokony hihinana "hanadio ny tenany ao anaty" izy. Saingy mety hihemotra izy io.
Ok izao tsy azo atao koa ny manome azy sakafo tsy miovaova toy ny mahazatra, fa ny maivana kokoa, maivana na vita an-trano, toy ny vary fotsy kely misy York ham, lasopy vary, sns. izay manampy amin'ny fandaminana ny vavony ary andao hojerentsika raha manatsara ny fahasalamany (ary indrindra raha mitazona sakafo sy rano ao an-kibo izy).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Rahoviana no hampiasa Primperan
Misaotra betsaka noho ny fanazavanao feno fahendrena, tena zava-dehibe hialana amin'ny korontana amin'ny fotoana ilana maika
Aretina tongotra mena amin'ny alika
Ny alikako dia mikiaka loatra, maninona?